mars 2020 - NorSom News
WASIIR isku dilay cudurka CORONAVIRUS dartiis
Norsomnews - 31. mars 2020
Falanqeyn: Asalka khilaafka masaajidka Towfiiq iyo xalkiisa.
Oslo: 40.000 ayaa lagu ganaaxay, markii uu dhowr mar kasoo baxay karantiilka
Norway oo 194 maxaabiis ah xabsiyada kasii deysay.
Gobolka Oslo oo hadana markale taageeradii dhaqaale u diiday Towfiiq.
Norsomnews - 30. mars 2020
Dhimashada Sweden oo 146 qof gaartay oo dowlada dalkaas oo wali is adkeyneysa.
Dowlada: NAV ha fududeyso shuruudaha helista ceyrta.
Hey´adda qoxootiga oo bogeeda kusoo qortay fariin kusocoto soomaalida.
Hooyaday ma booqan karo, cabsi aan ka qabo Corona-virus inaan qaadsiiyo owgeed.
Video: Muhiim: Qaabkan ayaa la isku qaadsiiyaa, loogana hortagi karaa Corona-virus.
War farxad leh: Soomaalidii degenaanshaha looga dhagnaa oo dowladu ay arintooda war kasoo saartay.
Wadan aan muslim aheyn oo guud ahaan khamriga mamnuucay.
Norsomnews - 29. mars 2020
Qofka ugu yar ee Norway u dhintay xanuunka, waa 62 jir.
Daawo: Booliska iyo laamaha caafimaadka oo soomaalida ka cabanaya
Xusuusin: Caawa ayaa saacada loo badalayaa xiliga sommerka.
Norsomnews - 28. mars 2020